China Pillow Block Bearings vagadziri uye vatengesi |Xinri
●Kuitwa kwekutanga kunofanira kunge kwakafanana nekweyakadzika groove ball bearings.
● Yakakodzera chiyero chepressurizing agent, hapana chikonzero chekuchenesa usati waiswa, hapana chikonzero chekuwedzera kumanikidza.
● Inoshanda kune zviitiko zvinoda midziyo yakapfava uye zvikamu, semichina yekurima, masisitimu ekufambisa kana michina yekuvaka.
Iyo pillow block inotakura ichokwadi musiyano weyakadzika groove bhora rinotakura.Mhete yaro yekunze yekunze dhayamita pamusoro ndeye denderedzwa, iyo inogona kufananidzwa mune inoenderana concave spherical inotakura chigaro kuti iite basa rekubatanidza.Iyo yekunze spherical bearing inonyanya kushandiswa kutakura iyo yakasanganiswa radial uye axial mitoro inova yakanyanya radial mitoro.Kazhinji, hazvina kukodzera kutakura axial mitoro chete.
Iyo yekunze dhayamita yepamusoro idenderedzwa, iyo inogona kuiswa mukati inoenderana concave spherical pamusoro pechigaro chinotakura kuita basa rekurongeka.Pillow block bearings inonyanya kushandiswa kutakura radial uye axial yakasanganiswa mitoro, iyo inonyanya kurodha radial.Kazhinji, hazvina kukodzera kutakura axial mitoro chete.
1.Low friction resistance, kushandiswa kwesimba shoma, kushandiswa kwepamusoro kwemagetsi, nyore kutanga;Kunyatsojeka, mutoro mukuru, kupfeka kuduku, hupenyu hurefu hwebasa.
2.Standardized size, interchangeability, nyore kuisa uye disassembly, nyore kugadzirisa;Compact structure, lightweight, small axial size.
3.Mamwe mabearings ane kuita kwekuzvigadzirisa;Inokodzera kugadzirwa kwemazhinji, yakagadzikana uye yakavimbika mhando, yakakwirira kugadzirwa kwehunyanzvi.
4. Transmission friction torque yakadzikira zvakanyanya pane fluid dynamic pressure bearing, saka friction tembiricha inokwira uye simba rekushandisa rakaderera;Nguva yekukwenya yekutanga inongokwira zvishoma pane inotenderera nguva yekukweshana.
5. Kunzwisiswa kwekutakura deformation kune kuchinja kwekutakura kuduku kudarika kwehydrodynamic.
6. Axial size idiki pane yetsika hydrodynamic bearing;Inogona kumira zvese radial uye kukanda zvakasanganiswa mitoro.
7. Kugadzirwa kwakasiyana-siyana kunogona kuita basa rakanakisisa pamusoro pehuwandu hwekutakura-ku-speed;Kutakura kuita hakune hanya nekushanduka kwemutoro, kumhanya uye kumhanya kwekushanda.
Kukanganisa kwepillow block inotakura nechigaro
1. Ruzha rukuru.Nekuda kwekumhanya kwekunze kwe spherical bearing nechigaro, ichaita ruzha rukuru pakushanda.
2. Chimiro chekutakura imba yakaoma.Kuti usangane nekushandiswa kwemhando dzakasiyana-siyana dzemabheti, dhizaini yeimba yekutakura inenge yakaoma, uye imba yekutakura inowedzerawo mari yekugadzirwa kwechigadzirwa, zvichiita kuti mutengo wose we rekunze rakaita denderedzwa rine chigaro rakakwirira.
3. Kunyange kana mabheya acho akanyatsogadziriswa, akaiswa zvakanaka, guruva-uchapupu uye unyoro-uchapupu, uye anoshanda zvakajairika, ivo vanozopedzisira vakundikana nekuda kwekuneta kweiyo rolling contact surface.
Pillow block bearing anowanzo shandiswa mumigodhi, simbi, kurima, indasitiri yemakemikari, machira, kudhinda uye dhayi, michina yekufambisa, nezvimwe.
Zvakapfuura: Series inopinza iine yakakwira chaiyo UCP 200
Zvinotevera: Wheel Hub Bearing
Mugadziri china ane mukurumbira UCPA
Mutengo wemakwikwi emhando yepamusoro isa une U...
Plastic imba inotakura block UCPH